Kutanga Akonia Holographics, ndiko kutsvaga kutsva kweApple. Ivo vanogadzira magirazi eakawedzera chaiwo magirazi | IPhone nhau
Haisi yekutanga uye haizove yekupedzisira emakambani kana kutanga kwekuti Apple inotenga zvine chekuita neakawedzera magirazi echokwadi. Uye ndizvozvo kubvira makore mashoma apfuura iyo Cupertino kambani yaizenge ichishanda "muchivande" pamwe nekugadzirwa kwechigadzirwa ichi.
Hatina kujeka nezve izvo zvavanogona kuvhura izvozvi kana mumakore mashoma, zvinoita sezviri pachena ndezvekuti kufarira kwakaratidzwa nevashandisi kwakadzikira nekufamba kwenguva. Ndichiri kurangarira kuti MWC kubva makore maviri apfuura umo zvese zvaive zvine chekuita neicho chaicho uye chakawedzera chokwadi, ikozvino zvanyanya kuomera kuti iyi ive nhau kunze kwekunge iri Apple iri kutarisira kutenga kutanga kana kambani yakatsaurirwa kune zvigadzirwa zvekugadzira kana software yeiyi tekinoroji.
Zviripachena kuti chakawedzerwa chokwadi uye magirazi echokwadi anoshandiswa nhasi muzvikamu zveindasitiri yechinyakare, indasitiri yemitambo nezvimwe zvakadaro, asi zvinoda push zvishoma kuti zviite kuti zvinyanye kufarirwa uye munhu wese anotanga kushandisa iyi inotonhorera tekinoroji. Hapana mubvunzo kuti kana paine munhu anogona kuzvipa izvo zvinosundira iri Apple uye zvinoita sekudaro ivo vanoramba vachiongorora maitiro ekuishandisa mune dzimba dzese.
Akonia Holographics, ndiko kutenga kwazvino kambani uko kwakakumikidzwa mukugadzirwa kwezvinhu zveiyi tekinoroji. Mune ino kesi, iyo inogadzira makristasi ayo aigona kuzokwanisa kuratidza ese marudzi emifananidzo yemavara mune yakafara nzvimbo yekuona. Chimwe chinhu chakakosha cheAkonia ndechekuti vanazvo mazana maviri kana anopfuura akanyoreswa patent uye ese anoreva holographic system.
Mune ino kesi iyo nhau dzinobva Reuters inotsanangura kuti kutenga kwacho kwaigona kunge kwakaitwa pakutanga kwegore uye kusati kwaburitswa nanhasi. Chero zvazvingaitika, hapana ruzivo nezve mutengo wekutenga uye kana nezve zvingangoita iko kutenga uku pazvigadzirwa zveiyo Cupertino kambani. Tinogona kuva nemhinduro munguva, izvozvi ndizvo kutanga kwakabatana zvakanyanya neakawedzera chokwadi chinobatana neApple's Shopping list.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Kutanga Akonia Holographics, ndiko kutsvaga kutsva kweApple. Ivo vanogadzira lenzi kune akawedzera echokwadi magirazi
Google Duo ikozvino inowirirana neApple iPads